Kaarbon daayi'oksaayidii - Wikipedia
Kaarbon daayi'oksaayidiin kuniin kompaawondii keemikaalaa kan atamii kaarben tokko fi ooksijiinii (oxygen) lama of keessa qaba. Yeroo baayyee foormulaa keemikaalaa isaa CO2 tiin beekkama. Kompaawondiin kuniin atimosfeerii lafaa keessatti xiqqaatee persentii tilmamaan 0.038% ta'uun yoo jirattu, kunii immo giriinhaawos gaaz(greenhouse gas) bayyee barbachisaa dha. Akkatta jajjabo(solid) isaa keessatti cabbii goggaa jedhame beekkama. Innis kutta gudda marsaa kaarbonii ti.
Chemical fi physical propertiesEdit
Kaarbon daayi'oksaayidiin gaazii qalama hin qabne yoo ta'u, yoo bayyinan gara keessatti afuuran fudhatamee (kunis waan hamma ta'e dha sababis rakko asphyxiation fiduu danda'a), dhandhama hamma afaan kessatti fi warranumma funaan fi qoonqo kessatti fiduu danda'a. Kunii immo kan dhufuu yoo gaaziin kuni mucous membrane fi gorora keessatti walitti makame, kaarboniik asidii jajjaba hin tanee ummu dha. Namii tokko dhugatti carbonate ofii kessa qabu (dhugaatii lallaafaa fi bishaan horaa/amboo) dhugee deeffachuu yoo yalle, waani akkana itti dhaqabu danda'a.
Rukkinni(density) gaazii kanaa tempireecharaa fi dhiibaa ummamaa keessatti hanga 1.98 kg/m³ yoo ta'u, kunii immo rukkina qilleensaa harka 1.53ttin caala. Molokiyuuliin Kaarbon daayi'oksaayidii (O=C=O) boondii harka lama lama ofii keessaa qaba, akkasumas fakkiin isaa dagale tokkoon (linear) dha. Dipole elektiriiki hin qabu. Akka ooksidaayizdi (oxidized) ta'etti (ooksijiinii of keessaa qabutti), gaaziin kun waantoota biraa wajjin dafee walitti hin makamu, akkasumas kan gubachu danda'u miti.
Dhiibbaa atmosferra sirrii (1 atm) fi tempireechara −78.5 °C irratti, Kaarbon daayi'oksaayidiin osoo dhangala'ootti hin jijjiramiin akkatta jajjaboo irra gara akkaataa gaaziitti akkataa sablimeeshin(sublimation) jedhamuun yokan gaazii irra gara jajjabootti akkata dippooziishin(deposition) jedhamuun jijjiirama. Akkatan jajjaboo isaa maqaa cabbi goggoga (dry ice) jedhamee beekkama. Kaarbon daayi'oksaayidiin dhangala'oo ta'e kan umamuu yoo dhiibbaan (pressure) 5.1 atm caalu dha. Qabxiin sadii isaa dhibaa 416.7 kPa irratti -56.6 °C yoo ta'u, akkasumas critical point isaa 7821 kPa irratti 31.1 °C dha.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaarbon_daayi%27oksaayidii&oldid=30562" irraa kan fudhatame
Last edited on 12 Caamsaa 2018, at 18:43
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 12 Caamsaa 2018, sa'aa 18:43 irratti.